Sehatra tsy miankina Tsy voahaja ny zon’ny mpiasa, mihetsika ny FISEMA
Tovolahy nisaraka tamin’ny olon-tiany Naparitany ny sary mamoafadin’ilay tovovavy
Tovovavy iray no nametraka fitoriana teo anivon’ny sampan-draharaha miady amin’ny Cybercriminalité eo anivon’ny Polisim-pirenena
Vehivavy Malagasy any Koweit Tsy mety voavaha ny olana
Misedra olana tanteraka ireo vehivavy Malagasy niasa tany Koweit ary mbola tavela any an-toerana vokatry ny fihidin’ny sisin-tany nateraky ny fiparitahan’ny tsimok’aretina Covid 19.
Tsenan’i Mahamasina niverina Tsy maintsy manaraka ny fepetra ny rehetra
Taorian’ny fanambarana nataon’ny kaominina Antananarivo renivohitra mikasika ny fiverenan’ireo tsena eto an-drenivohitra isan-kerinandro dia efa nisantatra ny anjarany omaly ireo mpivarotra etsy Mahamasina.
Toliara Efa tafakatra 650 ar ny kapoakam-bary
Raha nambaran’ny praiministra teny amin’ny Antenimierandoholona teny Anosikely tamin’ity fifanatrehan’ireo loholona sy ny governemanta mahazatra
JIRAMA Azo hefaina tsikelikely ny faktiora volana Jona
Mbola mitoetra eto amin’ny firenentsika amin’izao fotoana izao ny fahamehana ara-pahasalamana.
Antenimieram-pirenena Mifandimby mankeny amin'ny CCI Ivato ireo mpiasa
Araka ny fanazavana nomen'ny tompon'andraikitra vaovaon'ny serasera eny anivon'ny Antenimieram-pirenena Malagasy eny Tsimbazaza,
Mahery Lanto Manandafy “Mizotra any amin’ny fipoahana ara-tsosialy izao’’
Tsy maintsy ahodina ny toekarena raha tsy tiana ho faty ny Malagasy, hoy ny mpandinika raharaham-pirenena, Mahery Lanto Manandafy.
Namoaka fanambarana ny vondron` ny kaonferasionina hivondronan` ny sendikàn` ny mpiasa eto Madagasikara (FISEMA) manoloana ireo tsy fanajàna ny zon` ny mpiasa ataon` ireo orinasa tsy miankina sasany amin` izao fahamehana ara-pahasalamana izao.
Fandrahonana, fandroahana mpiasa amin` ny tsy antony… ireo dia santionan` ireo fandikan-dalàna sy herisetra ataon` ireo mpampiasa. Ho an` ny FISEMA, tsy voahaja ny fepetra napetrakin` ny fanjakana manoloana izany rehetra izany. Tsy misy koa ny finiavana mba hisian` ny fifampiresahana, etsy andaniny. Noho izany, mitaky fampiharana lalàna ary tsy hasiana fanavahana momba ny fandraisana an-tanana ara-tsosialy. Manao antso avo amin` ny ministeran` ny vola sy ny ministeran` ny asa sy ny lalàna sosialy ny FISEMA mba hampihatra ny naoty 027-MTEFPLS/2020 tamin` ny 26 Martsa 2020 sy izay tapaka tamin` ny fivoriana natao ny 23 martsa 2020 izay niarahana tamin` ny sehatra tsy miankina. Ankoatra izay, miantso kongresy nasionaly misahana ny asa mba hahafahana mametraka paikady aorian` ny fiatrehana ny aretina “coronavirus”. Manentana hatrany ny vahoaka ny FISEMA, indrindra ireo mpiasa, mba hitandrina ireo torolanana natao hiarovana mba hanaraka an-tsakany sy an-davany ireo toromarika hiarovana ny tenany amin` ny valanaretina.